Ny Teny fahafolo: Aza mitsiriritra
"Aza mitsiriritra ny tranon’ny namanao; aza mitsiriritra ny vadin’ny namanao, na ny ankizilahiny, na ny ankizivaviny, na ny ombiny, na ny borikiny, na izay mety ho an’ny namanao akory aza." Eksodosy 20:17
"Ary ny filana … dia miteraka ota ; ary ny ota, rehefa tanteraka, dia miteraka fahafatesana." Jakoba 1:15
Ny didy fahafolo angamba no tena lalina indrindra. Asongadiny tsara ny hevitra mavesa-danja fonosin’ny Lalàna, izay tsy manameloka fotsiny ihany ny asa sy ny teny, fa tonga hatrany amin’ny fakany mihitsy, dia ny fitsiriritana. Ny fitsiriritana dia mety hiseho amin’izay atao, na mety hiafina; nefa alohan’ny zava-drehetra, ny fitsiriritana dia toe-po.
Ny hoe fitsiriritana dia faniriana te hanana izay tsy an’ny tena, te hanana izay heverin’Andriamanitra fa tsy ilaina omena antsika. Io didy io dia mamely mivantana ny faka mahatonga ho tia harena sy hikatsaka foana ny fahafinaretana. Matetika ny haino aman-jery sy ny dokambarotra dia mikiry hampiditra fitsiriritana ao an-tsaina, ary mihazona antsika tsy ho afa-po mihitsy.
Tsy hoe mitsiriritra tsy akory, rehefa maniry hampiroborobo ny raharahan’ny tena, rehefa maniry handray ny karama tandrify ny asa na ny fanampiana ilaina ivelomana. Fa ratsy kosa ny faniriana te hanan-javatra, satria fotsiny hoe ananan’ny hafa izany. Nahoana no tsy hitsahatra haniry hanana mihoatra noho izay ilaina? Ny iray amin’ny voka-dratsin’ny fitiavan-karena sy fitiavan-tena diso tafahoatra, dia ny tsy firaharahana ny mahantra, na ireo akaikintsika izany, na ireo manerana izao tontolo izao.
Ny fitsiriritana dia mahatonga ho andevon’ny ota ary manakana tsy handray ny hafatry ny Tenin’Andriamanitra. Na ny kristiana aza dia mety ho voagejany. Ny Fanahin’Andriamanitra irery no mahay manafaka antsika amin’ny herin’ny ota: “Mandehana araka ny Fanahy, dia tsy hahatanteraka ny filan’ny nofo ianareo” (Galatiana 5:16). Hoy ny apostoly Paoly: “Izaho efa nianatra tsy hierina na manao ahoana na manao ahoana” (Filipiana 4:11).